फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफा १४ करोडभन्दा बढी, जगेडा कोष रकम १०२% वृद्धि
साउन ४, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले रू. १४ करोड १५ लाख २८ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
कम्पनीले सोमवार सार्वजनिक गरेको उक्त अवधिसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष खुद नाफा १ दशमलव २९ प्रतिशत बढी भएको देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १३ करोड ९७ लाख २८ हजार खुद नाफा गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा भने ३ दशमलव २९ प्रतिशत बढी भएको छ । अघिल्लो वर्ष २१ करोड ७९ लाख ७५ हजार सञ्चालन नाफा गरेको कम्पनीले गत वर्ष रू. २२ करोड ५१ लाख ४५ हजार यो नाफा गरेको हो । गत वर्ष कम्पनीले रू. ६ लाख ८८ हजार मात्र खराब कर्जा संकलन गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यो रकम रू. ३० लाख ७४ हजार थियो । सम्भावित जोखिम शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष रू. ३४ लाख ३२ हजार छुट्याएको कम्पनीले यस वर्ष रू. २ करोड ७५ लाख ७१ हजार छुट्याएको छ । सम्भावित जोखिम शीर्षकमा बढी रकम छुट्याएकाले कम्पनीको खुद नाफामा सामान्य मात्र वृद्धि भएको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८७ करोड ६८ लाख ११ हजार छ भने अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष जगेडा कोष रकम रू. १०२ दशमलव ५२ प्रतिशत बढी कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष रू. १३ करोड ८३ लाख ४३ हजार रहेको जगेडा कोष रकम गत वर्ष रू. २८ करोड १ लाख ७१ हजार कायम भएको हो ।
यस अवधिमा कम्पनीले ४८ प्रतिशत बढी रू. ८ अर्ब २० करोड ४१ लाख ९८ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य रहेको छ । गत वर्षको अन्तिम त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव १४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३१ दशमलव ९५ रहेको छ ।